06/16/13 ~ Myanmar Forward
ဆန္ဒပြသူများအား တူရကီရဲတပ်ဖွဲ့ ဖြိုခွင်းမှု (ရုပ်/သံ)
Posted by drmyochit Sunday, June 16, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ စနေနေ့တွင် တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ရှိ တက်ခ်ဆင်မ်ရင်ပြင်၌ စုရုံးဆန္ဒပြသူ များအား ရဲ တပ်ဖွဲ့က လူစုခွဲဖြိုခွင်းခဲ့သည်။ တူရကီတွင် အစ္စတန်ဘူလ်ရှိ ဂါဇီပန်းခြံအား ဈေးဝယ်စင် တာ အပါ အဝင် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရ၏စီစဉ်မှုကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ခဲ့ရာမှ ဆန္ဒပြမှုများ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
တူရကီဝန်ကြီးချုပ် အာဒိုဂန်က ဂါဇီပန်းခြံ စီမံကိန်းကို ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဟု ကတိပြုပြောကြားပြီး ဆန္ဒပြ သူများကို တက်ခ်ဆင်မ်ရင်ပြင်မှ ၂၄ နာရီအတွင်း ထွက်ခွာ၍ ဆန္ဒပြမှုများ ရပ်ဆိုင်းရန် သတိပေးခဲ့သည်။ ဝန်ကြီး ချုပ်အာဒိုဂန်၏ အဆိုပါသတိပေးချက် ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် တက်ခ်ဆင်မ်ရင်ပြင်အား ရဲတပ်ဖွဲ့ က ရှင်းလင်းဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မလေးရှားမှပြန်လာသူ ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းပေးဆောင်ရခြင်းမှာ မဟုတ်ဟု တာဝန်ရှိသူ ရှင်းလင်း
Posted by drmyochit Sunday, June 16, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၆။
ဇွန်လ ၁၄ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေသော First Weekly ဂျာနယ်တွင် ပါရှိသည့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ရန်ကုန် သို့ပြန် လာ သူတစ်ဦး ရန်ကုန် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ စစ်ဆေးရေးကောင်တာတွင် ငွေကျပ် တစ်သိန်းပေးဆောင် ရသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည့် သတင်းမှာ မဟုတ်မှန် ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ဒုညွှန်ကြားရေး မှူး ဦးကျော်မြင့်က ပြောကြားသည်။
“ဇွန်လ ၁၁ရက်နေ့မှာ မလေးရှားနိုင်ငံကနေ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်ပြန်လာတဲ့ ဒေါ်လှလှဝင်းဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက လေဆိပ် အဝင် စစ်ဆေးရေး ဂိတ် ကောင်တာမှာ ငွေတစ်သိန်း ပေးဆောင်ရ တယ်ဆိုပြီး First Weekly ဂျာနယ်မှာ ပြောဆိုထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်တဲ့ အကြောင်း အခုလို ရှင်းရတာပါ။ တကယ့်ဖြစ် ရပ်ကတော့ သူမ ကိုလာကြိုတဲ့ သူ့မောင်လေးက လာကြိုရ တဲ့အတွက် အိမ်ကနေ ၁သိန်းဆိုပြီး လိမ်တောင်းလို့ အခုလိုမျိုး ဖြစ်ရတာပါ”ဟု ဦးကျော်မြင့်က ပြောကြားသည်။
First Weekly ဂျာနယ်ပါ သတင်းဖော်ပြချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည်ဖြေရှင်းရန်အတွက် အဆိုပါ ဂျာနယ်ထွက်သည့်နေ့ ညနေတွင်ပင် လေ ဆိပ်မှတာဝန်ရှိသူများအပါအဝင် First Weekly ဂျာနယ်မှ တာဝန်ရှိသူနှင့် ကာယကံရှင် ဒေါ်လှလှဝင်းအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကာ မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း သိရပြီးယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တခြားတရားစွဲဆိုမှုများပြုလုပ်ရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း သိရသည်။
“အခုအချိန်မှာ အခုလိုမျိုး ဖော်ပြတယ်ဆိုတာ ဘာပဲပြောပြော သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကို ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က လက်ရှိအချိန်မှာ
ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့ ကူညီရမယ့် အချိန်ပါပဲ။ ပြီးတော့ အရင်ကထက်ကိုပိုပြီး ဂရုစိုက်ဖို့လည်း အားလုံးကို မှာကြားထားပြီးသားပါ”ဟုအထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်
ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့၌ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဒုက္ခကြုံနေရသူများအား ရန်ုကုန်သို့ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်လာရန်အတွက် Myanmar International Airway(MAI) လေယာဉ်ဖြင့် ကူညီခဲ့သူဦးရေမှာ ၉၇ဦးသာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ရန်ကုန်သို့ ၁၈၀ဦး ပြန်ရောက်လာသည်ဆိုသည်မှာ တခြား အကြောင်းအရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပြန်လာကြသူများအား ထည့်ထွက်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အက်ရ်ှတွန်အင်ဒါလင်းမြို့တွင် မူဆလင်လူငယ်ဂိုဏ်းတစ်ခုမှ ဗြိတိန်သူမိန်းကလေးများအပေါ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေ သည့် ဗီဒီယိုဖိုင် ယခုအပတ်အစောပိုင်းက ထွက်ပေါ်လာခဲ့။
ဗြိတိန်-ပါကစ္စတန်နွယ်ဖွားလူငယ်တစ်စုဟုဖော်ပြထားသည့် ဂိုဏ်းတစ်ခုက ဗြိတိန်သူအမျိုးသမီးလေးများအား ဘက်စ်ကား မှတ်တိုင်တစ်ခုတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ကိုပြသသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု အင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက် ဗြိတိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ အက်ရ်ှတွန်အန်ဒါလင်းမြို့တွင် တင်းမာမှုများ အလွန်အမင်းကြီးထွားလာခဲ့သည်။
မန်ချက်စတာမြို့နှင့်အလှမ်းမကွာသည့် ထိုမြို့လေးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် မြို့တွင်း လူထုစည်းဝေးပွဲ သို့မဟုတ် လှည့်လည်ဆန္ဒပြပွဲများ ကျင်းပရန် နိုးဆော်သည့် လူစုလူဝေးများ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်မြေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကြီး(EDL) မှလည်း အက်ရ်ှတွန်အန်ဒါလင်းမြို့တွင် အသင်းခွဲတစ် ခုကို အလျင်အမြန်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ထိုဗီဒီယိုဖိုင်ကို YouTube လိုင်းမှ ဖယ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သော်လည်း LiveLeak လိုင်းပေါ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သေးပြီး လွန်ခဲ့သည့်ည ကဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တိုက်ခိုက်မှုကို ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အက်ရ်ှတွန်အင်ဒါလင်းမြို့တွင်ဖြစ် ပွားခဲ့သည့် ထိုဗီဒီယိုထဲတွင် မူဆလင်လူငယ်တစ်စုက ဗြိတိန်ကလေးတစ်စုအား တိုက်ခိုက်မှုကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုဖိုင်အစမှာပင် မူဆလင်လူငယ်များထဲမှ တစ်ယောက်က ဗြိတိန်သူအမျိုးသမီးလေး၏ မျက်နှာအား လက်သီးဖြင့် ထိုး နှက်တိုက်ခိုက်နေမှုကို ပြသထားသည်။
ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်များမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ လမ်းများပေါ်တွင် ပုံမှန်ဖြစ်ပွားနေ ကျမျိုးဖြစ်လာကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ လွန်ခဲ့သောညတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အပြီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုသတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး တိမ်းဆိုဒ်ရဲဌာနမှ ဒေသ ဆိုင်ရာ ရဲဌာနများအနေဖြင့် ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှရရှိသည့် သတင်းအချက်များစွာအပေါ်အခြေခံ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း အသံလွှင့်အစီအစဉ်ပြောကြားသူသို့ ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ထပ် အတည်ပြုချက် မပေးသေးကြောင်းသိရှိရသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးချိန်အထိ နောက်ဆက်တွဲဖော်ပြချက်မရရှိသေးပါကြောင်း အသံလွှင့်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမှ ဖော်ပြခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့်ညက အက်ရ်ှတွန်မြို့လယ်တွင် လူစုလူဝေးများ စုရုံးခဲ့ပြီး နောက် အများပြည်သူဆိုင်ရာအက်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြင့် လူလေးဦးအား ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း ရဲဘက်ဆိုင်ရာမှဖော်ပြသည်။
ဒေသဆိုင်ရာအဏာပိုင်အဖွဲ့များမှ ပြစ်တင်ရှုံ့ချခဲ့သည့် အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုနောက်ဆက်တွဲအဖြစ် အခြားတိုက်ခိုက်မှုများ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလည်း သတင်းများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အက်ရ်ှတန်မြို့လယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တိုက်ခိုက်မှုများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကောလာဟလများပြန့်နှံ့လျက်ရှိပြီး အဓိကရုဏ်းများထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲ မမှန်သတင်းများ သာဖြစ် ကြောင်း တိမ်းဆိုဒ်ကောင်စီက လွန်ခဲ့သောညက ကြေငြာခဲ့သည်။
ရဲဌာနမှ မိဘများနှင့်အုပ်ထိန်းသူများအား ခလေးသူငယ်များကို အဆိုပါဒေသအတွင်း မသွားလာစေပဲ ထိန်းသိမ်းထားရန် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ဆိုသည့် သတင်းစကားများထွက်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး သတင်းအတည်ပြုချက်ကား မရရှိပေ။
အကြမ်းဖက်တန်ပြန်နှိမ်နင်းရေးကျွမ်းကျင်သူ၊ သတင်းဆောင်းပါးအယ်ဒီတာဖြစ်သူ ဂတ်ဖာဟက်ဆင်က -
ဒါဟာ အချိန်ပိုတွေအများကြီးရှိနေကြတဲ့ လူငယ်ဂိုဏ်းအဖွဲ့အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ ရန်ပွဲလေးလောက်ပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အစွန်းရောက် တဲ့ လက္ခဏာတော့ တွေ့ရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း အခြားတဖက်က ဘာသာရေးသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေးတာမျိုး အလားသ ဏ္ဍာန်တော့ မတွေ့ရပါဘူး၊ ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ ဘာသာရေးအပေါ်အလွန်အကျွံဝေဖန်မယ်၊
သာမန်ရာဇ၀တ်မှုလေးကို နိုင်ငံ ရေး စကားပြောဆိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်စရာဘက်ကို ရောက်ရှိသွားမှာပါ၊ ဗြိတိန်နေမူဆလင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ အပေါ် နောက်ထပ် အဆိုးမြင်ပြုမူပြောဆိုမှုတွေ အလွန်အမင်း တိုးပွားကျင့်သုံးလာတဲ့ဘက်ဆီကို ရောက်သွားမှာပါဟု ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
ကရစ်ကတ်ဘောလုံးရိုက်တံများကိုင်ဆောင်ထားပြီး လူငယ်တစ်ဦးက မိန်းကလေးတစ်ဦးအား ပြေးကန်နေသည့်မြင်ကွင်း အပါအ၀င် ထိုတိုက်ခိုက်မှုရန်ပွဲမှာ တနင်္လာနေ့ညက ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။
From: Shwemyanmar media group
အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းလေးဖွဲ့ပေါင်း ပြီး အမျိုးစောင့် ဥပဒေ မူကြမ်း တင်သွင်း ရန် ကြိုးပမ်း မှုနှင့် ပက်သက် ၍ သဘော ထား ထုတ်ပြန် ချက်
Posted by drmyochit Sunday, June 16, 2013, under ထုတ်ပြန်ချက် | No comments
ရက်စွဲ ။ ။ ဇွန်လ ( ၁၆)ရက် ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
၁) ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၃)ရက် နေ့ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုင်ရာ အကြိုညှိ နှိုင်း ပွဲမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီး များအား ဘာသာခြား နှင့် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း ကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေမူကြမ်း ကို တရားဝင် အတည်ပြုနိင်ရေး အတွက် လွှတ်တော် ကိုတင်ပြ မည့် အစီအစဉ် ကို ကြေညာခဲ့သည်။
၂)၄င်းကဲ့ သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီး များ၏ တစ်ဦး ချုင်းလွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေး ကိုချုပ်ချယ် ရန်ကြိုးစား မှုသည် ကုလသမဂ္ဂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာ စာတမ်း အပိုဒ် (၁၆) ပါ -- အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတိုင်း၏ လွတ်လပ်စွာ လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခွင့် ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ် သည်။
၃)အမျိုးသားရေး နှင့် ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှု အတွေး အခေါ် ကို အခြေခံသော မျိုးစောင့်ဥပဒေ အယူ အဆ သည် လူတစ်ဦးချင်းလွတ်လပ် မှု အခွင့် အရေး ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ဖြစ်သ ကဲ့ သို့၊ လူ တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) အမျိုး သမီး တစ်ဦးချင်းစီ ၏ ပုဂ္ဂလ ရွေးချယ် မှု အပေါ် စွက်ဖက် ထိမ်းချုပ်ခြင်းလည်းဖြစ်သ ဖြင့် လက်ခံ နိုင်ဖွယ် မရှိချေ။
၄) ဤ အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ကြမ်း အယူအဆသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီး တို့၏ ပုဂ္ဂလိ က လွတ်လပ်မှု ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြစ်သည့် အပြင် ၊ အမျိုးသမီး တို့ ၏ ဆင်ခြင်တုံ တရား ကို အထင်သေး စော်ကားခြင်းလည်းဖြစ် သည်။
၅)လက်ရှိ မြန်မာနိင်ငံ ၏အသွင်ကူးပြောင်းမှု အပေါ် နှောက်ယှက် ဟန့်တားလိုသော မသမာ သော လူတစ်စု ၏ ရန်ကို ကာကွယ်နိင်ရန် အတွက် လူမျိုး ဘာသာမရွေး ၊ ကျား -မ မရွေး ၊ အရပ်ဖက်လူ့ အဖွဲ့ အစည်းများ ၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အားလုံး အပါအဝင် ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး မတူ ကွဲ ပြား သည့် ဖြစ် တည် မှု များ ကို အပြန် အလှန် လေး စား တတ် သည့် အလေ့ အထ ကို မွေး မြူ ရင်း ၊ ညီညွတ်ကြရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်။
၆) မျိုးစောင့် ဥပဒေ ကို သာ အတည်ပြုခဲ့ ပါ က ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် အခြား ဘာသာဝင်များ နှင့် ရော စပ် ယှဉ် တွဲ နေထိုင်ရန် ယုံ ကြည် မှု ကိုယ်ခံ အား နည်း သော ၊ နိမ့်ကျစိတ်ကို အခြေခံသော၊ မလုံမခြုံ ခံစား နေ ရသော ဘာသာ ၊ သာသနာ ဖြစ် သည် ဟု ဆိုလို ရာရောက်ပေလိမ့်မည်။
၇) ဤသို့သော ၊ လူ့ အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး ၊ နိင်ငံရေး ၊ ဘာသာရေး နှင့် စိတ်ပညာ အမြင် များကို အခြေခံ ၍ - မျိုးစောင့် ဥပဒေ မူကြမ်း တင်သွင်းရေး ကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချ ပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင် အမျိုးသမီး ထု အနေဖြင့် မိမိ တို့ လွတ်လပ်မှု ကိုစွက်ဖက် ထိမ်းချုပ်လိုသော ၊ အမျိုးသမီး ထု ၏ ဆင်ခြင်တုံ တရား ကို ထိပါး စော် ကား သော ဤ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ကို ညီညွတ်စွာ ဆန့်ကျင် ကြပြီး၊ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အနေဖြင့်လည်း ဒီမို ကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်း မှု ကို နှောက်ယှက် ဟန့်တား လိုသော မသမာ သူ တစ်စု ၏ မရိုးဖြောင့်သော နည်းပရိယာယ် ကို အစဉ် မပြတ် သတိရှိ ကြရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော် အပ်ပါသည်။
၈) ယခု ကြေညာချက် ကို လွတ်လပ်မှု့ နှင့် လူသား ၏ ဆင်ခြင်တုံ တရား ကို လေးစား တန်ဖိုးထား မြှင့်တင်လို သော မည့်သည့် အမျိုးကောင်းသား အမျိုးကောင်းသမီး မဆို မိမိ တို့ နှင့် သဘောထား တူ မျှ ပါက လွတ်လပ်စွာ ဖြန့် ဝေ ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါသည်။
RAINFALL - အမျိုးသမီး အဖွဲ့ အက္ခရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ Colourful girls ရောင်စုံ မိန်းကလေး များ အဖွဲ့ KWEG- ကရင်အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့
အရိုက် ခံခဲ့ရသည်ဆိုသည့် အမျိုးသမီးက ပြင်ဦးလွင် NLD များကို အမှုဖွင့်
ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်အတွင်း NLD လုံခြုံရေးများ၏ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ဆေးရုံ တင်လိုက်ရသည် ဆိုသည့် အမျိုးသမီးက ပြင်ဦးလွင် NLD လုံခြုံရေးများကို အမှုဖွင့်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
NLD လုံခြုံရေးများ ရိုက်နှက်သဖြင့် ဆေးရုံတက်ခဲ့ရသည့် မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်သည် ယနေ့ ဆေးရုံက ပြဆင်းလာပြီ ဖြစ်ပြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ဝက်ဝံ ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
“ကျမ ဒီနေ့ ဆေးရုံက ဆင်းဆင်းချင်း ၀က်ဝံရဲစခန်းသွားပြီး အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ စခန်းက စစ်ချက်ယူနေပါပြီ” ဟု မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်က ပြောသည်။
မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်သည် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သောကြောင့် ပြင်ဦးလွင်ဆေးရုံတွင် ၃ ရက်အကြာ တက်ရောက် ကုသ ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီး ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ဆင်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးရုံ ရှိ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်များက ဆေးရုံ တပတ် တက်ခိုင်းသော်လည်း ၎င်းသားငယ်၏ လုံခြုံရေးကို စိုးရိမ်သည့်အတွက် ဆေးရုံတွင် ၃ ရက်သာ နေပြီး အိမ်တွင် ဆက်လက် ကုသလျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြင်ဦးလွင် ခရီးစဉ်အတွင်း ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့က ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် နားခိုသည့် တော်ဝင်နှင်းဆီခြံမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပြန် ယာဉ်တန်း ရှေ့သို့ သွားရောက်ကာ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့သော မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်ကို NLD လုံခြုံရေးအဖွဲ့က ဟန့်တား ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆေးရုံတင်ခဲ့ရကြောင်း ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးက ပြောသည်။
“ကျမက ၉ ရက်နေ့က မေးခွန်းငါးခု မေးဖို့အတွက် ထပြီး လက်ချောင်း ထောင်တာကိုလည်း သူတို့က မမြင်အောင် ကွယ်ထားတယ်။ အဲဒါနဲ့ နောက်တနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်တဲ့ ယာဉ်တန်းပေါ်မှာ ကျမ ပြောချင်တဲ့ စကားတွေနဲ့ စာရွက် စာတန်းတွေကို ပေးဖို့ လုပ်တဲ့အခါ ဒီမြို့ခံ NLD အဖွဲ့က လူတွေက ကျမကို အုပ်စုလိုက် ဆွဲထိုးတော့တာပဲ။ မိန်းမ တယောက်က လူပုံအလယ်မှာ ကျမအင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်တယ်။ ကျမ အင်္ကျီတခြမ်း ပြဲစုတ်ကုန်ပါတယ်။ ယာဉ်တန်းပေါ်မှာ ပါတဲ့ လူတွေက အဲဒီလို မလုပ်ဖို့ အော်ပေမယ့် ဘယ်သူမှ တားလို့ မရဘူး။ ကျမ တော်တော် ရှက်မိပါတယ်” ဟု ရိုက်နှက်ခံရသူ ပြင်ဦးလွင်မြို့မှ မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်က ရှင်းပြသည်။
မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်သည် ၎င်း၏အခက်ခဲများကို စာရေးထားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ဦးလွင်သို့ လာစဉ် ကိုယ်တိုင် လက်ထဲသို့ ထည့်ချင်သောကြောင့် ယာဉ်တန်းရှေ့သို့ သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူ့ကို အားကိုးလို့လေ။ အဲဒါကို ပြင်ဦးလွင် NLD အဖွဲ့တွေက ကျမလက်ထဲက စာကို မပေးဖို့ အတင်း တားဆီးကြတယ်။ ကျမကလည်း အတင်းရအောင် ပေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကားမှာ မပေးလိုက်နိုင်တဲ့ အတွက် နောက်က မန္တလေးတိုင်းရုံး ကားပေါ်ကို ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါကို ဒီကလူတွေက အဲဒီကားပေါ်က လူတွေကို အဲဒီစာယူမသွားနဲ့၊ ပြန်ချခဲ့လို့ အော်တဲ့အတွက် စာကို ပြန်ချခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ကျမလည်း အဲဒီစာကို ရအောင် ပြန်သွားကောက်တော့ ကျမရဲ့ လက်တွေကို ပြင်ဦးလွင် NLD က လူတွေက တက်နင်းတယ်၊ လက်တွေကျိုးမတတ် ကျမ အနင်းခံလိုက်ရတယ်။ ကျမကို အဲဒီလို စာပေးရပါ့မလားဆိုပြီး တယောက်က ကျမဗိုက်ကို အရင်စပြီး ထိုးတယ်။ ကျန်တဲ့လူ ၃ ယောက်က ကျမကို ၀ိုင်းချုပ် ပေးထားတယ်။ ကျမ ဘယ်လိုပဲ အော်ပြီး အကူညီတောင်းတောင်း ကူညီတဲ့သူ မရှိခဲ့ပါဘူး” ဟု မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်က ရှင်းပြသည်။
မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင် အရိုက်အနှက်ခံနေရသည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သိမသွားကြောင်း၊ ယခု လက်ရှိ အချိန်တွင် သိ၊ မသိကိုလည်း မပြောနိုင်သေးကြောင်း မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်၏ အဆိုအရ သိရသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မန္တလေး NLD တိုင်းရုံးသို့ တိုင်စာများ မရောက်ရှိသေးကြောင်း၊ တိုင်စာ ရောက်ရှိပါက အခြေနေများကို စုံစမ်းပြီး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေး NLD တိုင်းရုံးမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ကျနော် အဲဒီနေ့က မြင်လိုက်တာက ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ ကောင်မလေးက စာကို ယာဉ်တန်း ထဲမှာပါတဲ့ လုံခြုံရေးကားပေါ်ကို တင်လိုက်တာ။ ကျနော်တို့ စည်းကမ်းချက် အရ လုံခြုံရေးကားပေါ်ကို လက်ဆောင်၊ စာနဲ့ တခြား ပစ္စည်းတွေ လက်ခံလို့ မရဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကလေးတွေက အဲဒီစာကို ပြန်ချခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေး ကလည်း အဲဒီစာကို ပြန်ကောက်လိုက်တာ မြင်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ နည်းနည်းလေး ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ဖြစ်သွားတာတော့ သိတယ်။ ကျန်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကိုတော့ ကျနော်တို့ သေချာ စုံစမ်းရပါအုံးမယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
NLD မှ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်သီဟနှင့် မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်သည် ပြင်ဦးလွင် တရားရုံးတွင် ကလေးဖခင်အဖြစ် ဖွင့်ဟပြောကြားစေချင်သည့် အမှု ရင်ဆိုင်နေကြရပြီး အမျိုးသမီးဖြစ်သူ၏ ပြောကြားချက်အရ နှစ်ဦး သဘောတူ ချစ်သူ ရည်းစားဖြစ်ခဲ့ကာ အတူနေချိန်တွင် ကလေး ရရှိခဲ့ပြီး တာဝန်မယူခဲ့ကြောင်း၊ အမျိုးသမီးရေးရာသို့ တိုင်တန်းသည့် အချိန်တွင် ကလေး စရိတ်အဖြစ် တလလျှင် ကျပ် ၄ သိန်း ထောက်ပံ့ရန် သဘောတူခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအမှု ရင်ဆိုင်ရခြင်းသည် ကလေး မှတ်ပုံတင် လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် ဦးကျော်သီဟ၏ မှတ်ပုံတင် နံပါတ် တောင်းဆိုရာ မပေးဘဲ ငြင်းကွယ်သည်ကို မခံနိုင်သည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“တကယ်တော့ ကျမမှာ သားတဦးပဲ ရှိတာပါ။ သားက အခုတော့ ၇ တန်းပါ။ ကလေး ကျန်းမာရေး အခြေအနေ မကောင်းတဲ့အတွက် ကျောင်း ၂ နှစ်ဆက် နားခဲ့ရတယ်။ ကျမက ဦးကျော်သီဟကို ကလေးအဖေအဖြစ် တာဝန်ယူ ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိ ကလေး မှတ်ပုံတင် လုပ်ဖို့အတွက် ဖခင်မှတ်ပုံတင် လိုလာလို့ ကျမ သူ့ဆီမှာ မှတ်ပုံတင် နံပါတ် တောင်းတာပါ။ ဒါကို သူက မပေးတဲ့အတွက် ကျမ သားရဲ့ ဘ၀ရှေ့ရေးကို ငဲ့ကွက်ဖို့ တောင်းဆိုတာပါ။ ဒီကိစ္စကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီ စာတင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အတွက် ကျမကို အခုလို သူတို့တွေက လုပ်ကြတာပါ” ဟု မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်က ပြောသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီက ဦးကျော်သီဟကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ၎င်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ဦးလွင်သို့လာစဉ် ကြိုဆိုရေး၊ ဧည့်ခံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေး စသည့် တာဝန်များ ယူထားရကြောင်း၊ ဟောပြောပွဲ မစမီကတည်းက ယာဉ်တန်းရှေ့မှ ကြိုပိတ်မည် ဆိုသည့် သတင်းများ ရခဲ့သဖြင့် ဂရုစိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်ကို ရိုက်နှက်ခြင်း လုံးဝ မပြုခဲ့ကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့၍ မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်နှင့် အမှုဖြစ်နေသည့် ကိစ္စကို ဖြေကြားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
“သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယာဉ်တန်းလာတာကို အတင်းပိတ်ပြီး စာရွက်တွေ ပေးပါတယ်။ ဒီတွက် ကျနော်တို့က တားဆီးတာလောက်ပဲ ရှိတာပါ။ သူ့ကို ရိုက်နှက်တာတွေ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်တာတွေ တခုမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ မျက်မြင်သက်သေလည်း မရှိဘဲ အရမ်းပြောနေကြတာပါ။ တကယ်လို့ အဲဒီလိုလုပ်တာကို ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေ ရှိတယ်ဆိုရင် ရဲစခန်းမှာ သွားပြီး အမှုဖွင့်ဖို့ ပြောထားပါတယ်” ဦးကျော်သီဟက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယခုအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပုဒ်မ ၅၀၆ (ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု)၊ ပုဒ်မ ၃၅၄ နှင့် ၃၂၃ (ရိုက်နှက်မှု) တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး တိုင်ကြားသူ မခိုင်ဝတ်ရည်သန္တာမောင်ကို ယနေ့နံနက်တွင် စတင် စစ်ဆေးလျှက် ရှိနေကြောင်း ၀က်ဝံရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျသူတဦးက ပြောဆိုခဲ့သည်။
အမျိုးသမီး ကိုယ်ပျေက်သွားပုံကို လုံခြုံရေးကင်မရာ ၃ လုံးနှင့် ဖမ်းယူရမိ
Posted by drmyochit Sunday, June 16, 2013, under ဗွီဒီယိုသတင်း | No comments
Posted by drmyochit Sunday, June 16, 2013, under နည်းလမ်းများ | No comments
HTC One (Android 4.1.2) ကို root လုပ်နည်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဒီနည်းနဲ့စမ်းသပ်အောင်မြင်ထားတာဖြစ်လို့ အောက်မှာပြောထားတဲ့ step by step သေချာစွာလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ HTC One ဖုန်းကိုအောင်မြင်စွာ root လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကိုတော့ htconeroot website ကနေရထားတာပါ။ ဒီနည်းနဲ့ပဲအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အဆင်ပြေခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်လည်ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
Step 1. Settings /Developer options ထဲသို့ဝင်၍ USB debugging ကိုအမှန်ခြစ်ထားပါ။
Step 2. ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို USB ကြိုးအသုံးပြု၍ချိတ်ဆက်ပါ။
Step 3. အောက်မှာပေးထားတဲ့ HTC One Root Tool ဖိုင်နဲ့ Recovery image file ကို Download ရယူပါ။
Download HTCOneRoot.zip (For Windows, Mac, and Linux)
Download ရယူပြီးပါကHTCOne Root zip ဖိုင်ကို Win Rar / 7Zip အသုံးပြု၍ ဇစ်ဖြည်ထားပါ။ HTCOne Root ဖိုဒါထဲမှာ CWM Super SU v1.30.zip ဆိုတဲ့ဖိုင်လေး ပါ ပါတယ်။ အဲဒီ zip ဖိုင်လေးကို HTC One ဖုန်းရဲ့ internal Memory ထဲသို့ထည့်ထားပါ ။ USB ကြိုးနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ထည့်ပေါ့။
အကယ်၍ ဖုန်း Driver ကိုကွန်ပျူတာမှာ install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုပါက အခုပေးထားတဲ့ HTC One Root ဖိုင်ထဲမှာ HTCDriver_4.1.0.001.exe ဆိုတဲ့
Driver ဖိုင်လေးပါ ပါတယ်။ အဲဒါကို ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်လိုက်ပါ။
ဖုန်း Driver သွင်းပြီးပြီဆိုရင် ကွန်ပျူတာက My Computer icon ကို right click နှိပ် Manage ကိုရွေး Device Manger ထဲဝင်ကြည့်ပါ။ My HTC ဆိုတဲ့ Device Name လေးရှိနေပြီဆိုရင် Driver သွင်းတာမှန်ကန်အောင်မြင်ပါတယ်။
Step 4. ကွန်ပျူတာက Command Prompt /Terminal ကိုဖွင့်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းရိုက်ပါ
For Windows: (Window သမားများအတွက်)
For Mac: (Mac OS X သမားများအတွက်)
For Linux: (Linux သမားများအတွက်)
Step 5. ဖုန်းမှာ Full Backup ဆိုတာပေါ်လာရင် “Backup up my data” ကိုနှိပ်ပါ။ ဖုန်းထဲက data များကို backup လုပ်ပေးထားပါလိမ့်မယ်။
Step 6. Backup လုပ်ခြင်းပြီးစီးပြီဆိုရင် Settings->Power ထဲသို့ဝင်ပြီး Fast boot ကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်ထားပါ
Step 7.ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် Volume Down ခလုတ် နှင့် Power buttons ကို ၅ စက္ကန့်ခန့်တွဲနှိပ်ထားပါ။ အဖြူရောင် bootloader menu ပေါ်မလာခင်အထိနှိပ်ထားရမှာပါ။
Fastboot mode ထဲကိုဝင်ဖို့ Power Button ကိုနှိပ်ပါ။
ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို USB ကြိုးအသုံးပြု၍ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ။
Step 8. အပေါ်မှာတုန်းက Download ဆွဲခဲ့တဲ့ HTC One Root folder ထဲကိုဝင်ပါ။ ပြီးလျှင် folder ထဲက လွတ်တဲ့တစ်နေရာရာမှာ shift နဲ့ right click ကိုတွဲနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် Open Command Here ကိုရွေးပါ။ ပြီးလျှင် သက်ဆိုင်ရာ OS သုံးစွဲသူအလိုက်အောက်မှာပေးထားတာကိုေ၇ွးချယ်ရိုက်ပါ။
Windows သုံးစွဲသူများရိုက်ရန် :
Step 9. Token number များရလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ token id အကုန်လုံးကို Copy ကူးပါ။ ပုံထဲကအတိုင်းပါ။
Step 10. HTCDev.com ကိုသွားပြီး log-in ၀င်ပါ။ အကယ်၍ အကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင် HTC Dev .com မှာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ အကောင့်နဲ့ login ၀င်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ “Unlock Bootloader” ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် “Get Started” ကိုနှိပ်ပါ.
Step 11. “All Other Supported Models” ကိုရွေးပါ ။ ပြီးလျှင်“Begin Unlock Bootloader” ကိုရွေးပါ။
Step 12. Yes ကိုနှိပ်ပါ.
Step 13 : နှစ်ခုစလုံးကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး “Proceed to Unlock Instructions” ကိုနှိပ်ပါ။
Step 14. “Proceed to Step 5″. ကိုနှိပ်ပါ။
Step 15. “Proceed to Step 8″ ကိုနှိပ်ပါ။
Step 16. My Device Identifier Token ဆိုတဲ့ TextBox ထဲမှာ ခုနက Copy ကူးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Token ID အကုန်လုံးကို past လုပ်ပါ။
Step 17. Submit ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ထည့်သည့် Token ID မှန်ကန်သည်ဆိုပါက Token Submitted Successfully ဆိုတဲ့ message ပြပါလိမ့်မယ်။
Step 18. HTC Dev.com မှာအကောင့်လုပ်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ email ထဲကို Unlock_code.bin ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ mail ထဲကိုဝင်ပြီး အဲဒီ file လေးကို ကွန်ပျူတာသို့ download လုပ်ထားတာပါ။
Step 19. အခု Download လုပ်ထားတဲ့ Unlock_code.bin file ကို HTCOneRoot folder ထဲကိုထည့်ထားပါ။
Step 20. ပြီးရင် HTC One Root folder ထဲက လွတ်တဲ့တစ်နေရာမှာ Shift key နဲ့ right click ကိုတွဲနှိပ်ပါ။ Open Command Window Here ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် မိမိတို့သုံးတဲ့သက်ဆိုင်ရာ OS အလိုက် အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းရိုက်ပါ။
Step 21. ဖုန်း Screen ပေါ်မှာ Bootloader Unlock လုပ်မှာလားဆိုပြီးမေးပါလိမ့်မယ်။ Volume Up volume ကိုအသုံးပြုပြီး “Yes” ကိုရွေးပြီး Power button ကိုနှိပ်ပါ။ ဖုန်းက reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
Step 22. Once rebooted, your HTC One should be completely wiped and you should get Welcome message just like the day you got your phone. Sign in through the setup process then copy the CWM-SuperSU-v1.30.zip file in HTCOneRoot folder to anywhere on your HTC One’s internal storage.
Step 23. အဆင့် (၇) မှာတုန်းကပြောခဲ့တဲ့နည်းနဲ့  ဖုန်းကို Power ပိတ်ပြီး Boot Loader Menu ထဲသို့ဝင်ပါ။
Step 24. HTC One Root ဖိုဒါရဲ့ နေရာလွတ်တဲ့တစ်နေရာမှာ ခုနကလိုပဲ Shift key နဲ့ right click ကိုတွဲနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Open Command Windows here ကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် အောက်မှာပေးထားတဲ့ စာသားကိုရိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲကို teamwin recovery image ကိုသွင်းပါလိမ့်မယ်။
Step 25. ပြီးလျှင် ဖုန်းမှာပေါ်နေတဲ့ Bootloader Menu ထဲက “Bootloader” ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုရွေးပြီး Power ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Step 26. “Recovery” ဆိုတဲ့စာသားကိုရွေးပြီး Power button ကိုနှိပ်ပါ။
အခုသွင်းထားတဲ့ Teamwin Recovery ထဲသို့ဝင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
Step 27.TWRP recovery ထဲသို့ရောက်ပြီဆိုပါက “Install” ကိုရွေးပါ။
Step 28. ပြီးလျှင် အပေါ်ဆုံးအဆင့် (၃) မှာတုန်းက ဖုန်း internal memory ထဲကိုထည့်ခဲ့တဲ့ CWM-SuperSU-v1.30.zip ကိုရွေးပါ။
Step 29. Super SU ဖိုင်လေးကို Flash လုပ်ရန် စက်ဝိုင်းအလုံးလေးနဲ့ Slide လေးကို Swipe လုပ်ပါ။ ဖုန်းထဲသို့ super user app နှင့် su binaries များကို ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
Step 30. ပြီးလျှင် “Reboot System” ကိုနှိပ်၍ဖုန်းကို reboot ချလိုက်ပါ။
Step 31. ဖုန်းက ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်တက်လာပြီဆိုပါက ဖုန်းရဲ့ application list ထဲမှာ “SuperSU” ဆိုတဲ့ app လေးရှိမရှိစစ်ကြည့်ပါ။ ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ HTC One ဖုန်းကို အောင်မြင်စွာ root လုပ်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖုန်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအတိုင်း ပြန်လည်ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Step ကတော့နည်းနည်းများပါတယ်။
မလေးရှားမှပြန်လာသူ ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ငွေကျပ်တစ်သိန...
ဗြိတိန်သူ အမျိုးသမီးငယ်လေးများအပေါ် မူဆလင်လူငယ်တစ်စ...
အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းလေးဖွဲ့ပေါင်း ပြီး အမျိုးစောင...
အရိုက် ခံခဲ့ရသည်ဆိုသည့် အမျိုးသမီးက ပြင်ဦးလွင် NLD...
အမျိုးသမီး ကိုယ်ပျေက်သွားပုံကို လုံခြုံရေးကင်မရာ ၃...